About Us - Tianjin Tianxing Kesheng Isikhumba Products Co., Ltd
Tianjin Tianxing Kesheng Isikhumba Products Co., Ltd.is nomkhiqizi ezikhethekile emabhuzwini, ikakhulukazi ukhiqiza amabhuzu ahlukahlukene ukusebenza, ukuphepha boot, izintaba amabhuzu nokuvikeleka ukuqalisa futhi njll.
Sine abasebenzi 2000 imboni futhi ube umkhiqizo 4 million ngazimbili ngonyaka. Iningi lazo zidayiswa exhumene nezimakethe zomhlaba zezentengiselwano ezifana uthi uint, eningizimu Melika, eYurophu nase-Australia, eCanada, empumalanga maphakathi kanye njll. Inkampani yethu kufanele 80.000 imitha square yesimanje workshop zifane, amabhuzu 9advanced okwenza ukuba ukukhiqizwa imigqa (Okuqotho Goodyear Welt futhi ekuqiniseni kuhlanganisiwe 4 DESMA imishini umjovo) esikhiqiza amabhuzu nge TPU / PU futhi PU / PU ukuminyana ezimbili outsole, 2 PU ethela imishini esikhiqiza amabhuzu nge PU / PU ukuminyana ezimbili noma eyodwa outsole, Pu / Rubber umjovo oqondile udini umshini. , Siye sakha ebhuthini-US emakethe kusukela ngo-1991.
Sesidlule kwamabhuku sokuhambisana ISO9001-2000 & ISO14001-2005 elawula uhlelo nezinye isitifiketi sokuphepha, ezifana ASTM (amazinga ANSI-American), EN 345-S1, S2 & S3, CSA (amazinga Canadian), BIS & Benchmark (amazinga Australian).